Urur-siyaasadeed lagaga dhawaaqay Hargeysa iyo hadalladii laga yidhi | Berberanews.com
Home WARARKA Urur-siyaasadeed lagaga dhawaaqay Hargeysa iyo hadalladii laga yidhi
Urur-siyaasadeed lagaga dhawaaqay Hargeysa iyo hadalladii laga yidhi
Hargeysa(Berberanews):- Urur siyaasadeed cusub oo la yidhaahdo Ururka Dadka ee Daljir ayaa xalay lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa.
Afhayeenka Ururkan, Maxamed Xirsi Guuleed, oo ka hadlayey ujeedada ay u aasaaseen ayaa sheegay inay doonayaan ka qeybqaadashada tallada dalka, isla markaana ujeedooyinkooda ugu muhiimsani yihiin middaynta ummada Somaliland.
“Ujeeddooyinka ugu weyni waa ka qeybqaadashada talada dalka iyo middaynta ummada reer Somaliland,” ayuu yidhi Afhayeenka Ururkaasi. Ururkan oo la sheegay inla aasaasay 20 Jan, 2011, ayey xubno ka yihiin dhamaan muwaadiniinta ku nool gobolada dalka, ayaa sidoo kale xubnahiisa ay ka mid yihiin qeybaha haweenka, dadka laga tiro-badan yahay, iyo weliba dadka laxaadka la’.
Afhayeenka oo la weydiiyey xilliga shiweynaha ururkan la qaban doono ayaa sheegay marka xukuummadu ogolaato furashada ururada, isla markaana u hogaansan yihiin shuruucda iyo dastuurka dalka. “Marka xukuumadu ogolaato furitaanka ururada ayaan qabsan doona shirweynaha, waxaanan u hogaansan nahay shuruucda iyo dastuurka dalka.
”Ururkan ayaa la sheegay in golahiisa dhexe ka koonaan doono 45 xubnood oo labaatan haween yihiin, isla markaana dhamaan hogaanka ururka lagu dooran doono shirweynahooda markuu qabsoomo.
Ugu danbayn, afhayeenka ururka ayaa sheegay in ururkoodu kaga duwan yahay xisbiyada jira xaga saamiga ay siiyeen dumarka, dadka la’xaadka la’ iyo dadka laga tiro badan yahay, isla markaana yihiin urur la jaanqaadaya wakhtiga cusub oo doonayana inay soo saaraan siyaasiyiin da’ yar oo muruqooda iyo maskaxdooda ugu shaqeeya dadkooda.
Previous articleThe leader of Somaliland has called on the international community to give the breakaway state the recognition it “deserves”
Next articleLa-taliyaha Madaxwaynaha Arimaha Dhaqaalaha ,ganacsiga iyo maalgashiyga oo boogasho ku Tegay Dalka Qatar.